मलेसियाको अस्पतालमा अलपत्र राईका परिवार अझै सम्पर्कमा आएनन् !! सेयर गरेर घर सम्म पुग्न मद्दत गर्नुहोला ! News – Dainik Sangalo
मलेसियाको अस्पतालमा अलपत्र राईका परिवार अझै सम्पर्कमा आएनन् !! सेयर गरेर घर सम्म पुग्न मद्दत गर्नुहोला ! News
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन १०, २०७८ समय: १२:३५:४५
बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका एक नेपाली श्रमिक अस्पतालमा अ लपत्र परेका छन् । भोजपुरको साल्पासिलिङ्छो गाउँपालिकास्थित खाटाम्मा घर भएका कृष्णबहादुर राई मलेसियाको श्रेडांग हस्पिटलमा अ ल प त्र अवस्थामा भेटिएका हुन् ।
उनी भोजपुरस्थित धौलाबहादुर राईका छोरा हुन् । २ वर्षअघि मलेसिया पुगेको हाल मलेसियामै रहेका भोजपुरको दिङ्लाका मनु श्रेष्ठले जानकारी दिए । गाउँले श्रेष्ठका अनुसार राईको अवस्था निकै द य नी य अवस्थामा अस्पतालमा रहेका छन् ।
राई अहिले सामान्य होसमा आएका छन् । तर, यसअघि अस्पतालसम्म कसरी र कसले ल्याएको भन्ने बारे केही थाहा नभएको बताउने गरेका छन् । अस्पतालमा रहेका राईसँग मोवाईल नम्बर पनि नरहेकाले थप परिवार र आफन्तसँग समेत सम्पर्क हुन नसकिरहेको बताइएको छ ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार राईको घर परिवरार र आफन्तसँग सम्पर्क हुन नसकेकाले उद्दार गर्नसमेत स म स्या भइरहेको छ । अलपत्र अवस्थामा रहेका राईले आफ्नो आफन्त र परिवारसम्म खबर पु¥याएर उद्दारको वातावरण मिलाउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
Last Updated on: September 26th, 2021 at 12:35 pm